News Collection: भारत किन प्रचण्डको 'प्रधान शत्रु' बन्यो
भारत किन प्रचण्डको 'प्रधान शत्रु' बन्यो
काठमाडौं। देशमा तटस्थताको राजनीति तोड्ने क्रमको शुरुवात नेकपा एमाओवादीबाटै शुरु भएको छ।
पुस २ गते एमाओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले धेरै पछि तटस्थता तोडेर मोहन वैद्य पक्षतिर उभिन पुगेपछि तटस्थता तोड्ने राजनीति शुरु हुन पुगेको हो। यसअगाडि प्रचण्डले मोहन वैद्य तथा डा. बाबुराम भट्टराईको बीचमा रही सन्तुलित भूमिका तटस्थता निभाउँदै आएका थिए। प्रचण्डले तटस्थता तोडेर वैद्यको पक्षमा उभिएपछि एमाओवादीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा निकै फेरबदल आएको छ। प्रचण्ड तथा वैद्यबीचको गठबन्धनले अर्का उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका छन्। भारतलाई प्रधान शत्रु मान्ने तथा जनविद्रोहको तयारी गर्ने कार्यदिशा प्रचण्ड र वैद्यको बीचमा सहमति बनेपछि केन्द्रीय समितिमा सहमतिको दस्तावेज पेश भएको थियो। भारतलाई प्रधान शत्रु मान्ने र जनविद्रोहको तयारी गर्ने कार्यदिशा धेरै अगाडिदेखि वैद्यले अगाडि सार्दै आएका थिए। यसबारेमा उतिबेला प्रचण्ड सहमत हुन नसक्दा नै फरक–फरक दस्तावेज पालुङटारको विस्तारित बैठकमा पेश भएको थियो। अहिले वैद्यले उठाउँदै आएको यी दुई विषयलाई प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेपछि एउटै प्रतिवेदन पेश हुन सम्भव भएको हो।
प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजलाई वैद्यको राजनीतिक लाइनसित सामीप्य (एकाकार गर्नु) बनाउनु खास कारणले भूमिका निर्वाह गरेको सम्वद्ध सूत्रले बताएको छ। सूत्रका अनुसार पालुङटारको विस्तारित बैठकपछि काठमाडौंमा भारतका नेपालविज्ञ भनेर चिनिने एस.डी.मुनि र प्रचण्डबीच भएको भेटवार्तापछि प्रचण्ड भारतसँग थप सशंकित बन्न पुगेका हुन्। प्रचण्ड भारतसँग थप सशंकित बनेका कारण वैद्यसँग उनको निकटता बढेको हो। सूत्रका अनुसार भेटमा प्रचण्डलाई एस.डी.मुनिले बाबुरामसँग मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका (दबाब दिएका) थिए।
त्यसो नगरेमा प्रचण्ड र एमाओवादी पार्टीको नै भलाई नहुने नसिहत समेत मुनिले प्रचण्डलाई दिएका थिए। यसका अलावा डा. बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्देशनसमेत मुनिले प्रचण्डलाई दिएका थिए। सूत्रका अनुसार मुनिले यसरी पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनेगरी निर्देशन दिएपछि प्रचण्ड भारतसँग थप सशंकित बनेका हुन्। मुनिको निर्देशनलाई नाङ्गो हस्तक्षेप भनी प्रचण्ड भारतलाई प्रधान शत्रु मान्ने पक्षमा पुगेका हुन्।